အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ
၂၂ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၈
အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ မဲရကြရေးကို အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်းကြရတဲ့အတွက် တဖက်က တဖက်ကို ပါတီစွဲ စကားလုံးကြီးတွေသုံးပြီး မဲဆွယ် တက်ကြပါတယ်။ အကြိတ်အနယ် မဲဆွယ်ရာမှာ တဖက်ကတဖက်ကို အမည်တွေပေး ခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့ ဟောပြောကြပါတယ်။
Stand Patter = အမေရိကန် ဝေါဟာရနယ်ပယ်မှာ ဒီအသုံးအနူန်းက ပျော့ပြောင်းတဲ့ အသုံးအနူန်း။ သူမှာရှိနေတာကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲနေပြီး အပြောင်းအလဲ မလုပ်ချင်သူ။ ဒီစကားလုံးဟာ ပိုကာဖဲ ကစားနည်းတမျိုးက ဆင်းသက်လာတဲ့ ဝေါဟာရ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကာဖဲ ကစားတဲ့အခါ ဒိုင်က ဖဲချပ်တွေ ဝေပြီးချိန်မှာ ကစားသူတွေက ဖဲထုပ်ထဲက ဖဲချပ်နဲ့ကိုယ်ဆီက ဖဲချပ်ကို လှယ်ယူခွင့် ရှိပါတယ်။ ဖလှယ်လိုက်တဲ့ ဖဲချပ်က ကိုယ်အတွက် ပိုပြီ အကျိုးရှိမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့။ အကယ်လို့ ကိုယ့်ဖဲက ကောင်းနေလို့ မလှယ်ဘဲ နေသူကို Stand Patter လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ရပ်တည်ချက် မပြောင်းလဲသူ၊ ဘိုနေမြဲကျားနေမြဲ အခြေအနေကို လိုလားသူ။
I tell you unless we can vote all those conservative stand patters out of congress will never get changes we need to improve education and the health care systems.
"ဒီမှာ ကျနော်ပြောပါရစေ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီဘိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ အခြေအနေ လိုလားသူတွေ ကွန်ဆာဗေးတစ် ရှေးရိုးဝါဒီတွေကို ကွန်ကရက် လွှတ်တော်ထဲက ထွက်သွားရအောင် မဲမပေးနိုင်ကြရင် ပညာရေး နဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်တို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။"
Reactionary = ခံစားချက် ပြင်းပြင်းနဲ့ ပြောဆိုတဲ့ အသုံးစကား။ အဓိပ္ပာယ်က နိုင်ငံရေးမှာ ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးမှာဖြစ်စေ အပြောင်းအလဲ လုပ်တာကို တူးတူးခါးခါး ဆန့်ကျင်သူ ဖြစ်ရုံမက လက်ရှိဥပဒေတွေ နဲ့ ပေါ်လစီတွေကိုလည်း ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ဆီ နောက်ပြန်ဆွဲစိတ်ရှိနေသူပါ။ ဖောက်ပြန်ရေးသမား ဟုလည်း ပြောဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
"This man is so reactionary. He liked to take us all back to the year 1900. That was before we had social security and equal opportunity laws. And, before women had the right to vote."
"ဒီလူဟာ ဘယ်လောက်ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ လူလည်းဆိုတော့ သူက ကျနော်တို့ တတွေကို သက္ကရာဇ် ၁၉၀၀ ဆီကိုတောင် ပြန်ပြီးခေါ်သွားချင်တဲ့ အထိပါဘဲ။ အဲဒီခေတ်က လူမှုဖူလုံရေး နဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး ဥပဒေတွေလည်း မရှိသေးတဲ့ အချိန်။ အမျိုးသမီးတွေလည်း မဲပေးခွင့် မရတဲ့အချိန်ပေါ့။"
Red Neck - တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်က - လည်းပင်နီ။ အမေရိကန်ဝေါဟာရ အသုံးအနူန်းမှာတော့ "ပညာမဲ့ တောင်ယာသမား (အထူးသဖြင့် တောင်ပိုင်းက တောင်ယာသမား)။ နေ့စဉ် နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် လည်းပင်က နေလောင်ပြီး နီနေတဲ့ လူကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် လူဖြူအလုပ်ကြမ်းသမားကို ရည်ရွယ်ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဆင့်ပွား အခေါ်အဝေါ်ကတော့ Radical Bias - အစွန်းရောက် တဖက်စောင်းနှင် သဘောထားရှိသူ။ လည်းပင်နီတွေက ဆင်းရဲကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်က သူတို့အတွက် ဂရုမထားဘဲ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ တခြားလူမှုရေး အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်မှာသာ အလေးပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဒီလည်းပင်နီတွေက ခံယူကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမတ်လောင်းတွေက ဒီလည်းပင်နီ အုပ်စုက သူတို့ဟောပြောသမျှကို စိတ်ဝင်စားကြမဲ့ လူတွေလို့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒီတွေက အပိုင်တွက်ထားကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီလူတွေက မျိုးချစ်စိတ် အခြေခံရှိသူများ၊ ခေတ်ဟောင်းတုန်းက အခြေအနေကို ခုလက်ရှိ ဘယ်မှီမှာလည်း ခံယူထားကြသူတွေ ဖြစ်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒီတွေအတွက် သူတို့ဟောသမျှ သဘောကြမယ့် လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
"Usually, red necks in this state vote for conservative candidates, but this year it's hard to predict. Because they are getting hurt by slow down in economy."
"ထုံစံအနေနဲ့တော့ ဒီပြည်နယ်က အလုပ်ကြမ်းသမားတွေဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ် ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘဲ မဲထည့်လေ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ ခန့်မှန်းလို့ခက်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ စီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့ဒဏ်ကို သူတို့ခံနေရတယ်။"